N'ogbe GQ-208 onyinye Antifirizi zelọ ọrụ na ndị na-emepụta | Gaoqiang
JS-103 High Performance PCE Nne Mmanya
JS-104 Compound PCE Nne Mmanya
BT-302 High slump retaining PCE nne mmanya
BT-303 Super Slump na-ejigide PCE nne mmanya
Polycarboxylate Superplasticizer ntụ ntụ
USB Grouting Ukwu
Ihe na-emebi emebi
Onye Ike oge gboo
Mmiri Na-echekwa Mmiri
Polycarboxylate Superplasticizer Monomer na ọnọdụ Ether (TPEG-HPEG)
GQ-208 Ngwunye Antifirizi
GQ-208 nwere ihe na-eme ka mmiri belata mmiri na ọtụtụ ihe ndị na-adịghị edozi ahụ, ihe ndị na-eme ka mmiri ghara ị organicụ ọgwụ na ike mmalite. Tumadi na-eji na oyi na-ewu ụdị nile nke ihe nkedo na-ebe ihe, precast ihe. Ọdịmma ngwaahịa na JC475 na ụkpụrụ ndị ọzọ.
GQ-208 nwere ihe na-eme ka mmiri belata mmiri na ọtụtụ ihe ndị na-adịghị edozi ahụ, ihe ndị na-eme ka mmiri ghara ị organicụ ọgwụ na ike mmalite. Tumadi na-eji na oyi na-ewu ụdị nile nke ihe nkedo na-ebe ihe, precast ihe. Ọdịmma ngwaahịa na JC475 na ụkpụrụ ndị ọzọ
1.Effective ibelata kefriza ebe nke free mmiri na ihe iji gbochie ntu oyi.
2.Promote hydration nke ciment n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ dị ala, melite ike nke oge nke ihe, mekwuo ikike ntu oyi
3.Ọ nwere njirimara nke ike oge mbụ, mmelite, mbelata mmiri na ikuku ikuku. Enwere ike iji ya dị ka onye na-elekọta ike n'oge.
4.Gosipụta anụ ahụ na n'ibu Njirimara nke ihe, melite anwụ ngwa ngwa ndeksi
5.Low alkali, ọ dịghị corrosion ka ígwè mmanya. Na-adịghị egbu egbu, na-adịghị emerụ ahụ, nchekwa maka ahụike na gburugburu ebe obibi
1.Suitable maka oyi ewu nke nile di iche iche nke nkedo na-ebe ihe, precast ihe, nile di iche iche nke ngwa agha, wdg
2. Enwere ike iji ya mee ihe n'oge oyi nke ụzọ, ọdụ ụgbọ elu, Àkwà mmiri, ike eletrik, nchekwa mmiri, ọdụ ụgbọ mmiri na ụlọ ọrụ obodo na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
3.It nwere ike ikpokọta ya na mmiri na-ewedata gị n'ụlọnga iji kwadebe plastic ihe na mgbapụta ihe
4.D3 na-adabara ihe owuwu ahụ n'okpuru ọnọdụ ihu igwe na ọnọdụ okpomọkụ akọwapụtara -15 ℃ ma ọ bụ ọnọdụ okpomọkụ dị ala karịa -20 ℃; D4 kwesịrị ekwesị maka owuwu n'okpuru ọnọdụ ihu igwe na ọnọdụ a kapịrị ọnụ na -10℃ ma ọ bụ ọnọdụ okpomọkụ dị ala karịa -15 ℃
Otu esi eji
Ọnụọgụ ọgwụ: ntụ ntụ 2.0 ~ 3.0%; Mmiri mmiri bụ 2.0 ~ 3.0% (gbakọọ na ngụkọta ego nke ihe simenti).
Enwere ike itinye ntụ ntụ na igwekota ya na ngụkọta; Liquid nwere ike agwakọta ya na ịgwakọta mmiri, n'ụzọ kwesịrị ekwesị dịkwuo increasegwakọta oge. Ekwesịrị iji mmiri ọkụ na ebe a na-ewu ebe ọnọdụ kwere.
Agaghị agwakọta mkpokọta ahụ na ice, snow, otu oyi, wdg, na nchịkọta ahụ nwere ike ibute ụzọ ma ọ bụrụ na ọnọdụ kwere.
Ke ini etuep ewu ihe na mgbakwunye na mgbochi-na oyi na gị n'ụlọnga n'otu oge ka ga-nditịm mepụta "Winter ewu oru ụkpụrụ", ihe agbapụtara ihe kwesịrị-adọ kpuchie na plastic ịse, ike mkpuchi na mmezi
Ekwesịrị iji ọgwụ dị mma kpebisie ike dịka ọnọdụ ọnọdụ okpomọkụ na injinia chọrọ tupu iji ngwaahịa a
Mbukota & Nchekwa
Ntụ ntụ site na plastic akpa akpa mbukota, 50㎏/ akpa; Liquid site na drum, 250㎏/ drum ma ọ bụ nnukwu ụgbọ njem
Dee mmiri ngosi, elu okpomọkụ àmà, mmebi àmà; Oge nke nkwado bụ afọ 1, mgbe ọ gwụchara, ekwesịrị ikwenye ya site na ule iji ya ọzọ
Ngwaahịa a anaghị ewe iwe ma na-agbawa agbawa, debe ya nke ọma.
Osote: GQ-KG (L) / 01/02 USB Grouting Ukwu
Shandong Gaoqiang New Ihe Technology Co., Ltd.
Enwere ngwaahịa ọ bụla masịrị gị?
Dị ka mkpa gị si dị, hazie gị, ma nye gị ngwaahịa ndị bara uru karị.